Inotera - ukutyala nokunyamekela
I-Flower enotera ekhethekileyo kangangokuthi ayikwazi ukudideka nayiphi na enye, yonke impawu yakhe kunye nobuhle bayo, ibonisa ukutshona kwelanga. Ngokukhawuleza ukuba ilanga liqalise ukusetha, ngemizuzu embalwa i-yellow buds ekhanyayo yo kungena. Lo mboniso unokuthiwa ngummangaliso wendalo, ngexesha elincinci isiqithi esingathandeki siphenduka sibe yinto ekhanyayo. Ubusuku bonke iintyatyambo zihombise umyezo, kwaye ngengomso ziya kufuma kwaye i-buds entsha ivule ekuphumeni kwelanga. Ubungakanani bomntu ngamnye udla malunga ne-7cm.
Amaninzi amaninzi eenkwenkwezi zokuhlwa
Igama leentyatyambo ze-evening primrose lihlaziywa ngamagama amabini esiGrike "oinos" - iwayini kunye "ther" - irhamncwa lasendle. Kwakusetyenziswe kuthiwa ukuba isilwanyana sasendle sithintela isiphumo sesityalo esityhidiweyo ngewayini, ukusuka kwi-tincture yeengcambu ze-primrose yasebusuku, kuya kuba yindlu. Elinye igama le-primrose yamanhla yi-"oslinnik", mhlawumbi ngenxa yokufana kwamagqabi ayo kunye neendlebe zeendonki, "ukumkanikazi wobusuku" okanye "ubusuku bokuhlwa" ngenxa yobomi balo busuku. AmaJamani athiwa ngokuhlwa "ikhandlela ebusuku".
Ukuba uthe wagqiba ekubeni ulungise lo mhle kumyezo wakho, makhe sibone indlela yokuhlwaya ngokuhlwa kunye neemeko zokumenza.
Ndimele ndixelele ukuba i-enotera, ukutshala nokunyamekela oko kungabandakanyi iingxaki, unyaka owodwa, uneminyaka emibini ubudala kunye neminyaka emininzi ubudala. Ekukhethweni komhlaba kunye nendawo ye-enotera engenakuthobeka, indawo yehlabathi kunye nodongwe, into ephambili, ukukhuphela ngaphandle kobuninzi bomswakama uya kwenza. Umthunzi we-primrose yasebusuku akuyona into ephazamisayo. Xa utyala isityalo esingapheliyo, kufuneka ucinge ukuba kuya kukhula ngokukhula. I-Enotera, ubude bayo bufikelele kwi-120 cm, idinga indawo yamahhala, ngokuqhelekileyo, iya kuba yanele imitha 1.
Ukuhlakulela "uKumkanikazi wobusuku"
Ukulungele ukuhlwa kwamanzi kusihlwa kwiimbewu. Ngo-Meyi, bahlwayelwa, ehlobo nje kuphela amaqabunga, kwaye unyaka ozayo unokumxubisa intshukumo yezimbali ukusuka ngoJuni ukuya kuSeptemba. Nangona kunjalo, iintyatyambo zingabonwa ngunyaka omnye, kuba le mbewu ihlwayelwa ngoFebhuwari-Matshi ekamelweni, kwaye ke izityalo zityalwe kwisayithi. Kwakhona kuvumela i-exotera ukuba ikhule ngokuhlula ihlathi.
Kuba nayiphi na isimiya esi sityalo siyisipho sangempela, njengoko i-proverb ibandakanya ukukhula nokushiya ubuncinane. Kuxhomekeke ngokwaneleyo kwenkomfa, ngoko akufuneki ukutyilisa rhoqo. Kuphela kwixesha leentyantyambo, ukwenziwa kwamanzi ngexesha elifanelekileyo kuya kuthintela ubukhulu beentyatyambo. Kwakhona, i-equator ixhomekeke kakuhle ngamaqondo aphantsi okubusika. Yiloo nto, ngokwenene, kufuneka ukhangele, ngoko yinkqubo yesistim. Kweminye imihlobo, ibuhlungu kakhulu kwaye ininzi, iphazamise ezinye izityalo kwisayithi, ngoko kufuneka imiselwe kwaye iqwalaselwe xa idala i- flowerbeds . Sekunjalo kubalulekile ukuba ukhumbule, ukuba i-enotera, ukuveliswa okungenziwa lula ngokuzihlwayela, iyakwazi ukusasaza kwimiyezo. Ukuba kubalulekile ukuba uthintele oku, krazula amaqabunga aphihliweyo ngexesha.
Okuthakazelisayo kukuba kumaNdiya, i-primrose yasebusuku yayinokutya. Ukutya kunye namaqabunga, kunye neentyantyambo, kunye neengcambu ze-primrose. Inzuzo ekhethekileyo yingcambu yesityalo, njengoko isityebi kwimigodi kunye nesitashi.
Ukusetyenziswa okubanzi kwe-enotera kwamukelwe kwiiyeza zendoda kwiipropati zayo ezichasayo nezikhupha. I-cosmetology yanamhlanje iphinda ixabise ngokuhlwa, isebenzise ekuveliseni iindlela ezahlukeneyo zeoli yesikhumba kwiimbewu kwaye ikhuphe kwiiqabunga zokuhlwa. Ioli ye-oli inefuthe elifanelekileyo kwi-metabolism nokuhlaziywa kwesikhumba. Kwakhona, ioli ye-primrose iyacetyiswa ukunakekelwa kwepiki.
Ngokumangalisayo kwimvelo kunokudibanisa into enhle kwaye iluncedo!
Plum "UMoscow waseMoscow"
Unganisela njani iphalaenopsis orchid?
Ngaba kunokwenzeka ukuthoba iingcambu ze-monster?
Kutheni kungekhona i-gooseberry?
I-tea-hybrid rose "uHelga"
Zamiokulkas - ukusasazwa kweqabunga
Iipilisi zezityalo - indlela yokuzisebenzisa, iingcebiso ezilula
Ukhula njani iarley pearl?
I-Potulalk terry - ekhulayo kwimbewu, iimfihlelo zokutsalwa okuchanekileyo
Kutheni amaqhinga amaqabunga ezomileyo kwizityalo zangaphakathi?
Ukutsalwa kwetreenhouse for seedlings
I-hedgerow evela kwi-barberry
U-Otinum okanye i-Otipax - into engcono?
I-dicatitis ephezulu kwiintsana
Iintsapho ezifayo ziphupha ntoni?
Izinzuzo zeCottage Cheese
UMila Kunis noAshton Kutcher balungiselela intombi yabo ngekamva le "ballet"
Iipancakes ngaphandle kwamaqanda
Iipaneli zodonga lwamashishini
I-Tsikhlazoma i-bee - iimfihlo zezinto eziqulethwe kwi-aquarium
Iikhikhyula zendlela efanelekileyo kunye nezisombululo zanamhlanje
U Kate Mara uza kuba ngumfazi kaJamie Bell
U-Boycott "U-Oscar" ufumana ukukhawuleza
Indlela yokukhetha iengubo ezenziwe nge-bamboo?
IMyuziyam yaseMaritime (Jakarta)
Ukunyamekela nokugcinwa kweentlanzi ezibomvu
19 uthembisa ukuba wenze ngaphambi kokuba ube ngabazali
UJason Statham wayenomdla kwi-LG
Iimpuphu kwi-chin - isizathu